FAKAFAKA: satria ve poritra dia… | NewsMada
Gestion de la carte sanitaire: Le gouvernement scruté de près ...avril 30, 2021
Avotra soa aman-tsara ilay tovovavy… : Maty voatifitra teo amin’ny lohany ilay mpaka an-keriny ...avril 30, 2021
Nandeha moto avy namita iraka: Polisy monisipaly roa maty voafaokan’ny 4X4
Vaccin contre le Covid-19: les députés demandent à être vaccinés en priorité
“Raharaha fakana an-keriny” – Anjozorobe: zazalahikely 13 taona ny iray amin’ireo 14 voasambotra
Lutte contre le Covid-19: Andry Rajoelina au front
250 000 daozy ho tonga ny zoma izao…: hanomboka ny alatsinainy izao ny fanaovam-baksiny Covishield
Vaccin contre le Covid-19: 250.000 doses livrées ce vendredi
Raharaha fakana an-keriny – Anjozorobe: nirefotra ny basy, “zazamena” roa lavon’ny zandary
Population cible pour la vaccination: Atsimondrano prend les devants
Mitohy ny fihibohana faran’ny herinandro: miverina mianatra ireo hanala fanadinana
Mesures cntre le covid-19: Analamanga et 5 autres régions fermées
FAKAFAKA: satria ve poritra dia…
Par Taratra sur 20/04/2021
Ao anatin’ny vanim-potoana sarotra izao tontolo izao. Noho ireo kapoka mandrivorivo mahazo ny firenena tsirairay, samy mitodika sy miantsampy any amin’izay heveriny fa hahavonjy azy izy ireo. Ho an’ny Malagasy manokana, nanjary nahazo vahana eny an’ivon’ny fiarahamonina ny fampiasana raokandro raha notebahina tamin’ny “mikiky”, “ody gasy”, “Dadarabe”, sns, izy ireny teo aloha. Efa tsara ny dingana vita satria tsy nirehareha tamin-javatry ny hafa intsony Ramalagasy fa efa mahafantatra ny hasarobidin’ny momba azy.
… Saingy na izany aza, tazana ihany ilay hoe: “vokatry ny fahaporetana sy tahotra ange no nahatonga ny Malagasy hitodi-doha any amin’ny raokandro e!”. Raha tsy eo izany io tahotra sy fahaporetana io, dia ahoana? Hohadinoina indray ve ny fisian’ireny raokandro ireny? Hosoketaina indray ve ireo “mpanao fanafody gasy”?
Fotoana itodihana any amin’ny maha izy ny tena izao. Mila miverina amin’ny maha izy azy ny Malagasy. Tsy azo tsinontsinoavina ho zava-mandalo ihany izao mitranga ankehitriny izao fa tokony hametrahana lalindalina kokoa indray ny fototra maha Malagasy, raha hain’ny tsirairay ny manararaotra izany.
Raha tsy iainana anefa ny fiverenana ifotony, tsy azo antenaina ny hahitana vokatra tsara. Raha tsy misy afa-tsy ny fahaporetana sy ny tahotra ihany no manery ny Malagasy hahalala ny taniny sy ny raokandrony, azo antoka fa tsy ho lasa lavitra i Madagasikara.
… Sady mila iainana no mila trandrahina (fantarina sy hampahafantarina) ireo maha Malagasy ny Malagasy. Fa raha tsy izany no tanteraka, vonjy poritra sy kisarintsarin-javatra ihany no hanjaka eto!
Sidina Ethiopian Airlines: fiaramanidina cargo ilay tonga teny Ivato 07/05/2021
Tambajotra Mihari: ilaina ny fifampidinihana mikasika ny jono makamba 07/05/2021
Amparafaravola sy Ambatondrazaka: antsoina hijinja vary ny olona any Alaotra Mangoro 07/05/2021
Kitra – «Euro 2021»: nampitomboina ho 26 ny isan’ireo mpilalao 07/05/2021
« Ligues des Champions 2021 »: adin’ny samy Anglisy ny lalao famaranana 07/05/2021